``ဒ ၊ ဓ´´ပြဿနာဖြေးရှင်းနည်းများ
`` ဒ ၊ ဓ´´ ပြဿနာဖြေးရှင်းနည်းများ….ကို Zulu ရဲ့ Program အလိုက် ဖြေးရှင်းနည်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ဒဒွေး ဒုက္ခပေးနေသလား
• InDesign ... Edit > Preference > Type ကိုဖွင့်ပြီး Use Typographer's Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
• Illustrator ... File > Document Setup > Type ကိုဖွင့်ပြီး Use Typographer's Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
• Photoshop ... Edit > Preference > Type ကိုဖွင့်ပြီး Use Smart Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
• PageMaker7... File > Preference > General > More > Use Typographer's Quotes ကို Uncheck လုပ်ပါ။
• Corel Draw 12 ... Tools > Options ကိုဖွင့်ပြီး အဲဒီထဲက Text > QuickCorrect ကိုထပ်ဖွင့်ပါ။ အဲဒီမှာမှ ညာဘက်ခြမ်းမှာ အပေါ်ဆုံးဒုတိယတခုဖြစ်တဲ့ Change Straight quotes to typographic quotes ကို Uncheck လုပ်ပေးပါ။ (အပေါ်ဆုံးတခုကိုလည်း Uncheck လုပ်ထားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ စာကြောင်းရဲ့ ပထမဆုံးစာလုံးတွေကို Capital စာလုံးလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာအတွက်ဆိုရင် အဲဒါကို Uncheck လုပ်ထားပါ။)
• Microsoft Word ... Tools > Auto Correct ကိုဖွင့်ပါ။ အဲဒီထဲက Auto Format As You Type ကိုထပ်ဖွင့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Straight quotes with Smart quotes ကို Uncheck လုပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် ဒဒွေး ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ပါဘူးလေ။ အားလုံးပြုံးပျော်ကြပါစေဗျား ...icefiresterpmd ရဲ့ ဖြေးရှင်းနည်းအသေးစိတ်ကို တင်ပြဆွေးနွေးပါမယ်..Pmd အားလုံးမှာ file new တောင်းခံသည့်အချိန်၊ Word (သို့) powerpnt ထဲက စာသားတွေကို Pmdသို့ ကူးယူတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်…
• Pmd အားလုံးမှာ မှာ file - Preferences - General…. – More… - Use typographer’s – quotes ထဲက Uncheck လုပ်ပါ။အဆင်ပြေပါမယ်.
• Office 2007 Microsoft Word မှာဆိုရင် office Button – Word Options – Proofings –Auto correct Option… - AutoFormat As you type – ‘’strainght quotes’’ with “smart quotes” ကို Uncheck လုပ်ပါ
• Office 2007 Microsoft powerpoing မှာဆိုရင် အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းပါပဲ။
• Office 2007 Microsoft excel မှာဆိုရင် cell တစ်ကွက်ထဲမှာ``ဒ နဲ့ ဓ ´´ ကို တစ်လုံးတည်းထားရှိအသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ စမ်းသပ်လေ့လာဆဲပါ။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်တွေဟာ font နဲ့ပတ်သက်ပြီ fake ကိစ္စများကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်..မြန်မာစာကိုစတင်အသုံးပြုသူတွေမှာ ဖြစ်တက်ပါတယ်..Zawgyi သုံးရင်မဖြစ်လာပါဘူး၊Zawgyi ရဲ့အောင်မြင်မှုက တစ်ချိန်မှာ ဒဒွေး ဓ ပြဿနာတွေ ကျော်လွှာသွားမယ် ထင်တယ်စာဖတ်သူ လေ့လာမည်ဆိုပါက Computer Magazine no.6 October 2007 မှာပါတဲ့ ယူနီကုတ်ဆိုတာ ချိုနဲ့လား title ကိုလေ့လာပါ ချစ်စွာသော icefirester@gmail.comTechnorati Tags ဒဒွေး,ဒ,စာစီစာရိုက်,quotes,DTP, font+quotes,မြန်မာစာ
ဘန်ကောက်မြို့ကိုးယောက်မြောက်ရာမဘုရင် ဥယဉ်တော်ကြီး
သာယာလှပ ဘေးချမ်းမြေ့ 
ဇွဲကပင်ရှေ့မှာ တို့ ရဲ့ရွာ
လာလည်ကြပါ သူငယ်ချင်းတို့ ရာ